Onja manintona: inona avy ireo, toetra, fiaviana ary lanjany | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 18/02/2021 12:23 | astronomia
Fantatsika fa ny sehatry ny fizika dia misy lafiny maro izay manasarotra ny fahazoan'ny ankamaroan'ny olona azy. Ny iray amin'ireo lafiny ireo dia onja misintona. Ireo onja ireo dia nambaran'ny mpahay siansa mialoha Albert Einstein ary hita izy ireo 100 taona taorian'ny faminaniany. Izy ireo dia maneho ny fandrosoana ho an'ny siansa amin'ny teoria momba ny relativitiana an'i Einstein.
Noho izany, hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny onjan-gravitational, ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy ireo.
1 Inona ireo onja misintona
3 Toetra mampiavaka sy fiavian'ny onja misintona
4 Famantarana sy ny maha-zava-dehibe
Inona ireo onja misintona
Izahay dia miresaka momba ny fanehoana fikorontanana amin'ny fotoana-habakabaka izay ateraky ny fisian'ny vatana goavambe manafaingana izay miteraka fanitarana angovo amin'ny lafiny rehetra amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana. Ny fisehoan'ny onja misintona dia mamela ny fotoana malalaka hiparitaka nefa tsy afaka miverina amin'ny toetrany voalohany. Izy io koa dia miteraka fikorontanana mikroskopika izay tsy azo jerena afa-tsy amin'ny laboratoara siantifika mandroso. Ny fikorontanana misintona rehetra dia afaka miely amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana.
Matetika izy ireo dia novokarina teo anelanelan'ny vatan'ny habakabaka roa na maromaro izay mamokatra fampielezana angovo azo amin'ny lafiny rehetra. Tranga iray izay mahatonga ny fotoana malalaka hiparitaka amin'ny fomba ahafahany miverina amin'ny toetrany voalohany. Ny fahitana ny onja misintona dia nitondra anjara biriky lehibe tamin'ny fandalinana ny habaka tamin'ny alàlan'ny onjany. Misaotra an'izany fa azo alefa ny maodely hafa hahafantarana ny fihetsika asehon'ny habakabaka sy ny toetrany rehetra.
Na dia iray amin'ireo fiheverana farany nataon'i Albert Einstein aza tao amin'ny teoria momba ny fitiavany aina dia ny filazalazana ny onja misintona, hita izy ireo zato taona taty aoriana. Araka izany, ny fisian'ireo onja misintona ireo izay nomarihin'i Einstein dia azo hamarinina. Araka ny voalazan'ity mpahay siansa ity, ny fisian'ity karazana onja ity dia avy amin'ny derivation matematika izay nanambara fa tsy misy zavatra na signal mety ho haingana noho ny hazavana.
Efa zato taona taty aoriana tamin'ny taona 2014, ny mpikaroka BICEP2 dia nanambara ny fahitana sy ny tohatry ny onja gravitational izay nateraka nandritra ny fanitarana izao rehetra izao tao amin'ny Big Bang. Fotoana fohy taorian'ity vaovao ity dia azo nolavina rehefa nahita fa tsy tena izy io.
Herintaona taty aoriana, ny mpahay siansa tamin'ny andrana LIGO dia nahatsikaritra ireo onja ireo. Tamin'izany fomba izany no nanomezan'izy ireo antoka ny mpanatrika hanambara ny vaovao. Araka izany, Na dia tamin'ny 2015 aza no nahitana azy ireo dia nambaran'izy ireo izany tamin'ny 2016.
Toetra mampiavaka sy fiavian'ny onja misintona
Ho hitantsika izay toetra mampiavaka ny solontena indrindra izay mahatonga ny onja gravitational ho iray amin'ireo zava-dehibe hitantsika indrindra amin'ny sehatry ny fizika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ireo dia fikorontanana izay manova ny refin'ny habaka-habakabaka amin'ny fomba ahafahany manitatra azy nefa tsy mamela azy hiverina amin'ny toerany voalohany. Ny toetra mampiavaka azy ireo dia ny fahafahany mampiely amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana sy amin'ny lafiny rehetra. Onja miampita izy ireo ary azo atao polarized. Midika izany fa manana fiasan'ny andriamby koa izy.
Ireo onja ireo dia afaka mitondra angovo haingam-pandeha sy amin'ny toerana lavitra be. Angamba ny iray amin'ireo fisalasalana nipoitra momba ny onjan-gravitialy dia ny tsy nety hamaritra tanteraka ny fiaviany. Izy ireo dia afaka miseho amin'ny refy isan-karazany arakaraka ny hamafin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Na dia tsy mazava tsara aza dia misy mpahay siansa maro manandrana mamorona ny fomba niavian'ny onjan-gravitation. Andao hojerentsika hoe inona avy ireo toe-javatra mety ahafahana mamorona azy ireo:
Rehefa mifampiresaka samy hafa ny vatan'ny habakabaka avo roa na maromaro. Ireo valalabemandry ireo dia tsy maintsy lehibe ho an'ny herin'ny hery misintona.
Ny vokatry ny boribory misy lavaka mainty roa.
Izy ireo dia mety hiteraka ny fifandonan'ireo vahindanitra roa. Mazava ho azy fa zavatra tsy mitranga isan'andro izany
Mety hitranga izy ireo rehefa mifanindry ny orbite neutron roa.
Famantarana sy ny maha-zava-dehibe
Andao izao hodinihintsika fohifohy ny fomba nahafahan'ny mpahay siansa LIGO nahafantatra ireo karazana onja ireo. Fantatray fa miteraka fikorontanana amin'ny haben'ny mikroskopika izy ireo ary amin'ny alàlan'ny fitaovana avo lenta ihany no ahafahana mamantatra azy ireo. Tsy maintsy tadidiko ihany koa fa marefo ireo fitaovana ireo. Fantatra amin'ny anaran'ny interferometers izy ireo. Izy ireo dia voaforon'ny rafitry ny tonelina maromaro kilometatra maromaro ny elanelany ary apetraka amin'ny endrika L. Mandalo ireo tionelina lava kilometatra ireo izay mipoitra fitaratra ary manelingelina rehefa miampita. Rehefa misy antsamotady gravitational dia azo atao tsara ny mamantatra izany amin'ny alalàn'ny fotoana fohy. Ny fiforonan-trano dia misy eo anelanelan'ny fitaratra hita ao amin'ny interferometer.
Fitaovana hafa izay afaka mamantatra onja gravitational koa dia teleskaopy radio. Ny teleskaopy amin'ny radio toy izany dia afaka refesina amin'ny jiro amin'ny pulsars. Ny maha-zava-dehibe ny fitadiavana ireo karazan-onja ireo no ahafahan'ny olombelona mandinika tsara izao rehetra izao. Ary moa ve izany noho ireo onja ireo dia afaka mandre tsara ny hovitrovitra manitatra amin'ny fotoana tsy voafetra ianao. Ny fahitana ireo onja ireo dia nahatonga azy hahatakatra fa azo tsinontsinoavina izao rehetra izao ary mivelatra sy miovaova ny endrik'ireo endrika rehetra miaraka amin'ny endrika onja.
Marihina fa mba hisian'ny onja misintona dia tsy maintsy foronina ny fomba mahery setra toy ny fifandonana amin'ny lavaka mainty. Izany dia noho ny fandalinana ireo onja ireo izay ahazoana loharanom-baovao fa ireo fisehoan-javatra ireo sy ireo loza mahatsiravina izay mitranga eny amin'ny habakabaka. Ny trangan-javatra rehetra dia afaka manampy amin'ny fahazoana sy manazava lalàna fototra maro ao anatin'ny sehatry ny fizika. Misaotra an'izany, fampahalalana marobe dia azo omena momba ny habakabaka, ny niandohany ary ny fiovan'ny kintana na nanjavona. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia nalaina ihany koa mba hianarana bebe kokoa momba ny lavaka mainty. Ohatra iray amin'ny onja misintona Izy io dia hita amin'ny fipoahan'ny kintana, ny fifandonana amin'ny meteorite roa na rehefa misy ny lavaka mainty. Izy io koa dia mety ho hita amin'ny fipoahana supernova.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny onjan-gravitational sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » astronomia » Onja mahery vaika